‘Thailand 101’ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသိထားသင့်တဲ့ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ နှင့် ဖတ်ပြီးသူများရဲ့အသံများ – Myanmar Live
ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လေချွန်ပြီးလူကိုခေါ်တာ၊ လက်ယက်ပြီးခေါ်တာအဆန်းတော့မဟုတ်ပါ ဘူး ဒါပေမယ့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ စတဲ့အပြုအမူတွေကိုမလုပ်မိဖို့တော့လိုမယ်နော် ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ထိုင်းလူမျိုးတွေက ခွေးနဲ့အခြားတရိစ္ဆာန်တွေကိုခေါ်ရင် လေချွန်၊ လက်ယပ်ပြီးခေါ်တာကြောင့်ပါ
ဒါကတော့အမြည်းပဲရှိပါသေးတယ် အခြားမတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုတော့ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလာ ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိတဲ့ မြန်မာညီအကိုမောင်နှမတွေကို လက်မလွတ်ရလေအောင်ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာ မားအတွက်ထိပ်တန်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Myanmar Live နှင့်ပံပိုးကူညီသူများပူးပေါင်းကာ ထိုင်းနိုင်ငံရှိမြန်မာ နိုင်ငံသားများအတွက် ‘Thailand 101’ ဆိုတဲ့လက်စွဲစာအုပ်ထုတ်လုပ်ခါ တာ့ခ်ခရိုင် မဲ့ဆောက်-မြ၀တီ နယ်စပ် ဂိတ်မှာ အခမဲ့ပေးဝေးလာခဲ့တာ အခုဆိုရင် ၆ ကြိမ်မြောက်ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်
120,000 คน/เดือน คือ จำนวนแรงงานเมียนมาที่เข้า-ออกทำงานในไทยผ่านด่านชายแดน แล้วเราจะขายสินค้าให้พวกเขายังไงดี?ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ATHENA MEDIA ขอพาคุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเมียนมาอย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้ เริ่มต้นแบบ 101 ตั้งแต่พวกเขาก้าวเท้าแรกเข้าสู่ประเทศไทยกันเลย!.THAILAND 101 คัดทุกเรื่อง 'สำคัญ' ที่แรงงาน 'อยากรู้'บุ๊คเลทฉบับพกพา ต้อนรับแรงงานเมียนมาที่เพิ่งเข้ามาทำงานในประเทศไทยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด-เมียวดี จังหวัดตาก อัดแน่นความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อการใช้ชีวิตและเอาตัวรอดพื้นฐาน เช่น สิทธิแรงงาน กฎหมายเบื้องต้น ความรู้รอบตัวด้านต่างๆ ฯลฯ เรียบเรียงจากความเข้าใจในพฤติกรรมแรงงานเมียนมาที่เรารู้จริงมานานกว่า 1 ทศวรรษ.แค่ได้ 'ลอง' แล้วจะ 'รัก'บุ๊คเลท THAILAND 101 มาพร้อมกับถุง SAMPLING บรรจุสินค้าขนาดทดลอง แจกฟรีให้ชาวเมียนมาได้ใช้สินค้านั้นๆ เพื่อให้ได้สัมผัสประสบการณ์ จดจำ ประทับใจ นำไปสู่การซื้อใช้ซ้ำจนถึงขั้นรักสินค้าระยะยาว.• 'เบ็ดเสร็จ' ทุกขั้นตอนตั้งแต่แพ็ค จัดส่ง จนถึงจุดแจก• ให้จาก 'มือ' ถึง 'มือ' ตั้งแต่ก้าวแรกเข้าสู่ชายแดนไทย• เป็นกันเองเหมือน 'พี่น้อง' ด้วยทีมงานเมียนมาแจกให้และพูดคุยแนะนำอย่างเป็นมิตร• 120,000 คน ต่อเดือนที่จะจับจ้องสินค้าของคุณได้จดจำ• การันตีเนื้อหาน่าสนใจเข้าถึงแรงงานโดย Myanmar Live และ บัตรต่างด้าว – ထိုင်းနိုင်ငံရှိမြန်မာအလုပ်သမားများ ที่ชาวเมียนมาในไทยติดตามมาอย่างยาวนาน——————————–Athena Media สื่ออันดับ 1 ที่เข้าถึงคนเมียนมาทำสื่อโฆษณากับคนเมียนมาไม่ยากอย่างที่คิด ลองปรึกษา Athena Media ดูสิคะโทร. 02-652-2688-9——————————–#AthenaMedia #สื่อเมียนมาอันดับหนึ่ง #สื่อเมียนมาในไทย #สื่อเมียนมาในพม่า #MyanmarinThailand #MyanmarinMyanmar #ออกเที่ยว #คนเมียนมา #เมียนมา #ประเทศเมียนมา #Sampling #ทำสื่อโฆษณา
Posted by Athena Media on Wednesday,5June 2019
“ကောင်းပါတယ် အဆင်ပြေတယ် နားလည်ရလွယ်တဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေနဲ့ရေးထားတော့ပို အဆင်ပြေပါတယ်”
“ဒီလိုမျိုးအကျိုးရှိတဲ့အရာတွေမျှဝေတော့ဝမ်းသာမိပါတယ် ဒီခေတ်မှာက စာဖတ်အားနည်းသွားပြီလေ အလုပ်သမားတွေကြားမှာ ဒီလိုမရှိမဖြစ်လက်စွဲစာအုပ်လေးထုတ်ပေးထားတော့ ဖတ်ဖြစ်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်”
“ဒီလိုမျိုးစုစည်းထားတာတွေမရှိလိုဘူး တစ်အုပ်ထဲမှာအားလုံးပါရှိထားတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ”
စက်တင်ဘာလမှာလည်း ‘Thailand 101’ နဲ့ဆုံတွေ့ကြရဦးမှာဖြစ်တာကြောင့် မြန်မာညီအကိုတွေနဲ့ အနီးကပ် ထိတွေ့ခွင့်ရဦးမှာဖြစ်ပါတယ် တာ့ခ်ခရိုင်မဲ့ဆောက် – မြ၀တီ နယ်စပ်ဂိတ်အရင်နေရာမှာဆုံကြမယ် အသေးဆိပ် အချက်အလက်တွေကိုသိချင်ရင်တော့ Facebook: Myanmar Live နဲ့ www.myanmarlivenews.com မှာ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
Athena Media No.1 media company which offersafull-service both online and offline focusing on millions of Myanmar people who live in Thailand and Myanmar.Contact Us153/3 Golden Land Building, 4th Floor, Unit D-4, Soi Mahardlek Luang 1, Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330.Tel.:+662-652-2688-9Email: athenamediaofficial@gmail.comhttps://www.athenamedia.co.th#AthenamediaThailand
Posted by Athena Media on Thursday, 23 May 2019
Call Us: +662-652-2688-9
Previous Article မြန်မာပိုက်ကျော်ခြင်းအသင်းများ ထိုင်းဘုရင့်ဖလားပွဲ ဝင်နွှဲမည်
Next Article ဂျပန်နိုင်ငံသို့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းကလွဲ၍ လုပ်သားစုဆောင်းသည့်အေဂျင်စီကို အရေးယူမည်သတိပေး